မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: “ကရုဏာလက် သွေးလှူဒါန်းခြင်း “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
“ကရုဏာလက်” လူမှုအကျိုးပြုလူငယ်များ ၏
လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများတွင်အရေးပေါ်သွေးလှူဒါန်းခြင်းသည် လည်းတခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းများတွင်အရေးပေါ်သွေးလိုအပ်နေသော ချို
အားအခမဲ့သွေးလှူဒါန်းခြင်းကို “ကရုဏာလက်” လူငယ်များက ဇီဝိတဒါနအဖြစ်
အားအထူးတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ယခုမှတ်တမ်းတင်ထားဖြစ်သော သွေးလှူရှင် “ကရုဏာလက်”
နကုသိုလ်အား ကရုဏာလက် အနေဖြင့်သာဓုအနုမောဒနာပြုပါသည်။မြန်မာလူငယ်များတိုင်းပြည်
အမှတ်စဉ် သွေးအလှူ သွေးလက်ခံ အသက် သွေးအမျိုးအစား လှူသောနေ့
၁။ ရှင်ဥာဏ မလွင်ဖြိုးဖြိုးသန့် ၅နှစ် A
၂။ ဦးအေးကို မဂျူးဂျူးလှိုင် ၅နှစ် B
၃။ ကိုဇော်ထူးအောင် မောင်မင်းသိန်း ၁၃နှစ် O ၂.၇.
၄။ ကိုခိုင်မျိူးအောင် မောင်ကျော်ကျော်မျိုး ၁၀နှစ် A ၂
၅။မသက်ထက်စံ ဦးစံအေးကျော် ၄၉နှစ် A ၁၀.၇.၂၀၁၀
၆။မနန်းသန်းသန်းဋ္ဌေး ဦးစံအေးကျော် ၄၉နှစ် B ၁၀.၇.၂၀၁၀
၇။ဦးနန္ဒ၀ံသ မောင်ကျော်ကျော်မျိုး ၁၀နှစ် O ၁၃.၇.
၈။ဦးသုစိတ္တ မောင်ညီဇင်ထက် ၄နှစ် B ၁၃.၇.
၉။ကိုအောင်ဆန်းမြင့် မောင်ရဲမင်းနိူင် ၁၅နှစ် AB ၂.၄.၂၀၁၀
၁၀။ကိုသီဟသန်းဝင်း မဥမ္မာခိုင် ၂၄နှစ် A ၂၃.၄.၂၀၁၁
၁၁။ကိုလင်းလင်းထွန်း ဘေဘီလှလှစိုး ၃ ရက် O ၂၅.၄.၂၀၁၁
၁၂။ကိုအောင်ကိုကိုလွင် မ၀င်းပပ ၄၁နှစ် B ၂၆.၄.၂၀၁၁
၁၃။ကိုနိူင်သန်းဝင်းထွန်း Babyခင်မျိုးသွယ် ၂ ရက် A ၉.၅.၂၀၁၁
၁၄။ကိုချစ်ရန်တိုး Babyခင်မျိုးသွယ် ၂ ရက် A ၉.၅.၂၀၁၁
၁၅။ကိုအောင်ဇော်ဝင်း မသန်းသန်းဋ္ဌေး ၃၈နှစ် B ၁၀.၅.၂၀၁၁
၁၆။ကိုမြတ်မင်းကို မသူဇာခိုင် ၁၉နှစ် B ၁၀.၅.၂၀၁၁
၁၇။ကိုဝေလင်းထွန်း ဦးအေးမြင့် ၅၂နှစ် O ၁၀.၅.၂၀၁၁
၁၈။ကိုထွန်းမိုင်ဟိန်း မခိုင် ၂၃နှစ် A ၁၃.၅.၂၀၁၁
၁၉။ကိုထူးအောင် ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း ၃၇နှစ် O ၁၃.၅.၂၀၁၁
၂၀။ကိုမင်းသီဟတင့် မခိုင် ၂၃နှစ် A ၁၃.၅.၂၀၁၁
၂၁။ကိုမောင်ခိုင် Babyသီတာဝင်း ၃ ရက် O ၁၇.၅.၂၀၁၁
၂၂။ကိုလပြည့်ဦး ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း ၃၇ နှစ် O ၁၉.၅.၂၀၁၁
သားအိမ်ရောဂါRest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:54 AM